Ukuhlolwa kwe-Covid okudingeka emazweni: wonke amazwe nezimfuneko | Izindaba Zokuhamba
Ukuhlolwa kwe-Covid kuyadingeka emazweni
Luis Martinez | 19/04/2021 10:10 | Amathiphu, General
Yazi i- Ukuhlolwa kwe-Covid okudingeka ezweni sekuyimininingwane ebalulekile ngemuva konyaka wobhadane. Unentshisekelo yokuhlala usesikhathini nabo, ikakhulukazi uma kufanele ukuhamba njalo ngebhizinisi noma ukuvakashela izihlobo.
Ngoba isizwe ngasinye sinezinga elihlukile lokungenwa yilesi sifo kusukela lapho imithi yokugoma ihamba kancane, ayikho iphethini ejwayelekile ebingasungulwa ngezidingo ezidingekayo zokuhamba. Akukwazanga ngisho nokusebenzisa lokhu ngaphakathi kwe- I-European Union, izifundazwe zazo nazo ezihlukile kunesidingo noma sokungenzi izivivinyo ukuvakashela izindawo zazo. Kukho konke lokhu, sizokubukezela izivivinyo zeCovid ezidingekayo ngezwe.
1 Ukuhlolwa kwe-Covid kudingwa yizwe: kusukela kokubalulekile kuya kokunconyiwe
1.1 Ukuhlolwa kwe-Covid e-European Union
1.1.5 INetherlands, iphakathi kwezinzima kakhulu ngokuya ngezivivinyo zeCovid ezidingeka emazweni
1.2 Ukuhlolwa kwe-Covid kudingwa amazwe angaphandle kwe-European Union
1.2.3 ISwitzerland, okunye kokufuna kakhulu ngokuya ngezivivinyo zeCovid ezidingeka emazweni
Ukuhlolwa kwe-Covid kudingwa yizwe: kusukela kokubalulekile kuya kokunconyiwe
Sizoqala ukubukeza kwethu ne-European Union uqobo, ngoba amazwe ayiqukethe aphakathi kwamazwe avakashelwa kakhulu. Ngemuva kwalokho, sizohlaziya isimo kwezinye izingxenye zomhlaba, ikakhulukazi emazweni athola isibalo esiphezulu sabahambi.
Ukuhlolwa kwe-Covid e-European Union
Izifundazwe ze-European Union zinokuthile izidingo eziqinile lapho wamukela izivakashi. Ukwanda okunamandla kobhadane ezindaweni zabo kululeka ngale ndlela. Eqinisweni, ngaphezu kwezivivinyo ezihambisanayo noma izivivinyo ze-PCR, bavame ukucela eminye imibhalo. Esikhathini esizayo esiseduze, kubhekelwa futhi ukuthi kusetshenziswe i- Iphasiphothi ye-Covid. Ake sibone imithetho ngezwe.
Cabanga ngalokhu España indawo enobungozi obukhulu. Ngakho-ke, izilinganiso zayo zikhona kwababukhali kakhulu. Uma usuka ezweni lakithi, kuzofanele wethule iPCR engemihle eyenziwe amahora angama-48 ngaphambi kokufika. Ngaphezu kwalokho, kuzofanele ubhalise kufayela le- irekhodi ledijithali futhi, uma usezweni, gcina a Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-10 eyehliswa ibe ngu-5 uma wethula isivivinyo esingesihle seCovid.
Akuvumeli ukundiza kusuka eSpain okwamanje. Uma ukwenza kusuka kwelinye izwe, kuzofanele wethule iPCR engemihle eyenziwe amahora angama-72 ngaphambi kokufika kwakho. Ngokufanayo, kufanele wenze ifayela le- incwadi efungelwe ngogesi ukuthi awuhlushwa yilesi sifo bese ugcwalisa a Indawo Yomgibeli. Ekugcineni, bazofuna i- Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-7.
I-Thermal cycler noma umshini we-PCR
Omakhelwane bethu bayasivumela ukuthi singene ezweni labo, kepha futhi kuzofanele wethule i-PCR engemihle ngeminyaka yobudala engamahora angama-72 bese ubhala isitatimende esifungisiwe ukuthi awunayo i-Covid. Ngokunjalo, uma kwenzeka uveza izimpawu endleleni noma lapho ufika, kuzofanela uzinqumele.
Kwakungenye yamazwe aqala ukuhlukunyezwa yilesi sifo futhi avumela nokungena kwabaseSpain. Kepha, uma ufuna ukuvakashela izimangaliso ezifana amaRom o FlorenciaKufanele futhi wethule ne-PCR engemihle eyenziwe okungenani emahoreni angama-48 ngaphambi kokuhamba futhi kuzofanela ugcwalise incwadi efungelwe ngaphambi kokuqala uhambo. Futhi, uma unezimpawu, kuzodingeka uzihlukanise.
INetherlands, iphakathi kwezinzima kakhulu ngokuya ngezivivinyo zeCovid ezidingeka emazweni
Njengoba sikutshela, phakathi kwezizwe ezivumela ukuhamba kusuka eSpain, lokhu kungenye yezimo ezinzima kakhulu ngokwezidingo. Ngoba bakucela ukuhlolwa kwe-PCR kuze kufike emahoreni angama-72 ubudala, kanye nokugcwalisa ifayili le- ifomu lokuhlolwa kwezokwelapha kokubili ekuphumeni nasendleleni ebuyayo futhi ezinye izidingo.
Kodwa-ke, uma ngaphandle kwakho konke lokhu unezimpawu, zizokuvimbela ukuthi ungene ezweni. Futhi, uma kubangelwa lapho ufikile, kuzofanela ugcine Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-10.
Ungahamba futhi uye kumakhelwane wethu wasentshonalanga uma ufisa, kepha ngemikhawulo ehlukahlukene. Kufanele wethule iPCR engemihle futhi uyenze emahoreni angama-72 ngaphambi kokungena kwakho ezweni.
Kufanele futhi umboze ifayela le- ikhadi lendawo yomgibeli Futhi, uma iSpain isemazingeni angaphezu kwamacala angama-500 kubakhileyo abangu-100 (okungenjalo okwamanje), kufanele ugcine Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-14. Ngakolunye uhlangothi, uma uya ku- Madeira o Ama-Azores, bazokucela futhi ukuthi ugcwalise i- uhlu lwemibuzo lwe-epidemiological.
Umuntu uthola umuthi wokugomela i-Covid
Ukuhlolwa kwe-Covid kudingwa amazwe angaphandle kwe-European Union
Sithola izinhlobonhlobo ezinkulu zezimfuno ezizweni okungezona ezendawo evamile yaseYurophu. Kwamanye amazwe ubufakazi abudingeki, kepha lokho sizokubeka eceleni. Ake sibone ukuthi iziphi ezidinga uhlobo oluthile lwemfuneko.
Siqala ngombuso osanda kushiya i-European Union futhi onezinga eliphakeme kakhulu lokugoma emhlabeni. Ungayivakashela uma ufisa, kepha kuzofanele ugcwalise i- ifomu lendawo yomgibeli ekufikeni kwakho. Ngaphezu kwalokho, ngokuya ngomzuzwana we-epidemiological okukuwo, kungadingeka ukuthi wenze i- Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-10.
Kuleli lizwe, futhi, ukugoma sekuthuthuke kakhulu. Noma kunjalo, ayikuvumeli ukungena kwabahambi abavela eSpain. Ngakolunye uhlangothi, uma ufika uvela kwenye indawo, uzokwazi ukungena ezweni, kepha kuzofanele wethule iPCR engemihle eyenziwe ngamahora angama-72 ngaphambi kokufika kwakho noma ngosuku osondele kuyo.
ISwitzerland, okunye kokufuna kakhulu ngokuya ngezivivinyo zeCovid ezidingeka emazweni
Izwe laseSwitzerland lisenhliziyweni yeZwekazi Elidala futhi, yize lingeyona eye-European Union, liyingxenye yeSchengen Area. Lesi sivumelwano siyisusile imingcele yaso yangaphandle, kepha, njengamanje, iSwitzerland ibekelwe imingcele kakhulu ngokwamukelwa kwabahambi.
Ungaya kuyo, kepha kufanele wethule iPCR engemihle eyenziwe amahora angama-72 ngaphambi kokufika. Lapho usufikile, kuzofanele wenze ifayili le- Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-10 Lokho kungehliswa kube ngu-7 uma kwenzeka uthola enye i-PCR. Futhi, kufanele ugcwalise ifayela le- ikhadi lokulandelela othintana naye.
Izwe okuvela kulo ubhadane futhi manje selunemingcele emikhulu ngokwamukela izivakashi. Uma ufuna ukuya eChina, uzodinga ukwethula i-PCR ne-a I-IGM (ukutholwa kwe-immunoglobulin) okungekuhle okwenziwe amahora angama-48 ngaphambi kokufika kwakho. Ngaphezu kwalokho, kumele ngabe zenziwa ilabhorethri etholakala ku- okumhlophe inikezwe yindlu yenxusa lakuleli.
Le eyodwa nje, kuzofanele ikunikeze i- tarjeta futhi lapho ufika eChina, kuzofanele phinda i-PCR bese ugcwalisa a ifomu lezempilo. Uma kwenzeka eyokuqala ivuma, uzophoqeleka ukuthi udlulise i- a Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-14.
Izwe laseNyakatho Melika liyakwenqabela ukungena endaweni yalo kubahambi abadlulile izinsuku eziyi-14 ngaphambi kokufika kwakho eSpain. Uma uvela kwesinye isizwe, kuzofanela ukuthi umboze ifayela le- ifomu lemininingwane futhi a isitatimende sezempilo ngaphambi kokuhamba. Ngaphezu kwalokho, izwe ngalinye linemikhawulo yalo.
Umakhelwane wethu eningizimu umise izindiza ezivela eSpain. Uma kwenzeka ufika uvela kwelinye izwe, kuzofanele wethule iPCR engemihle efike emahoreni angama-72 ngaphambi kohambo. Ngaphezu kwalokho, kufanele ibhalwe ngesiFulentshi, isiNgisi noma isi-Arabhu. Ekugcineni, lapho ufika, bazokucela eyakho ikhadi lezempilo labagibeli.
Yize kuku-antipode yethu, ungahle udinge noma ufune ukuya e-Australia. Uma kunjalo, sizokutshela lokho ayigunyaziwe eSpain. Uma uphuma kwesinye isizwe, bazokucela esisodwa isitatimende sokuhamba futhi ungaphoqeleka ukuthi uphase a Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-14.
Naphezu kokuba ngelinye lamazwe ahlaselwe kakhulu yilo bhubhane, iBrazil ikuvumela ukuba uhambe usuka eSpain. Kodwa-ke, kufanele wethule iPCR engemihle eyenziwe amahora angama-72 ngaphambi kohambo lwakho bese ugcwalisa ifayili le- ifomu lezempilo.
Uma sikhuluma ngezivivinyo ezidingekayo zeCovid emazweni, iMexico ingenye yezinto ezingafuneki kangako. Ukuhambela lapho, kuzofanele umboze ucingo kuphela Uhlu lwemibuzo lokukhomba ubungozi kubahambi lapho ufika.
Isizwe seCaribbean, esixhumene ngokomlando neSpain, sikuvumela ukuthi ungene uma uvela ezweni lethu. Noma kunjalo, kudinga kakhulu ngokwezidingo. Kuzofanele wethule iPCR eyenziwe amahora angama-72 ngaphambi kokuhamba.
Lapho ufika, kufanele ugcwalise ifayili le- isimemezelo sempilo futhi kungenzeka ukuthi bakwenza enye i-PCR. Ngaphezu kwalokho, unesibopho sokukhokha i- isilinganiso AmaRandi angama-30 ase-US futhi, uma i-PCR yokugcina ekhonjiwe inika ithemba, uzophoqeleka ukuhambisana nayo ukugxila.
Leli zwe liphinde lahlaselwa kabi yilo bhubhane. Eqinisweni, okwamanje ukuhamba kusuka eSpain akuvunyelwe. Uma ukukwenza kusuka kwelinye izwe, kuzofanele wethule i-PCR engemihle enamahora angama-72 ubudala bese usayina u-a incwadi efungelwe yezempilo. Ekugcineni, kufanele ufake isandla ubufakazi bokuthi unomshwalense ehlanganisa izindleko zezempilo ezingabangelwa yiCovid uma kwenzeka uba nesifo.
Isikhungo sokuthola i-Covid-19 eNew Zealand
Kwakungenye yezizwe zokuqala, ngemuva kweChina, ukuthinteka yilo bhubhane. Mhlawumbe yingakho iqine kakhulu lapho wamukela izihambi ezivela kwamanye amazwe. Endabeni yalabo abavela eSpain, abavumeli ukungena uma bachitha izinsuku zokugcina eziyi-14 ezweni lethu.
Izindiza ezisuka eSpain zimisiwe, okungenani, kuze kube April 30. Uma uvela kwelinye izwe, kuzofanele wethule iPCR engesihle ngesiNgisi futhi wenze amahora angama-72 ngaphambi kokufika kwakho. Futhi, ungaphoqeleka ukuthi ugcine Ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyi-14.
Futhi izwe lase-Andes linalo izindiza ezivela eSpain azivunyelwe, okungenani kuze kube maphakathi no-Ephreli. Uma ufika usuka kwenye indawo, kuzofanele wethule iPCR engemihle eyenziwe ngamahora angama-72 ngaphambi kohambo. Uzodinga futhi ukulayisha ifayela le- umbiko ongemuhle bese umboza i- incwadi efungelwe yezempilo futhi kuwo wonke amahora angama-72 ngaphambi kwendiza yakho lesi sixhumanisi.
Ekuphetheni, sikwenzele ukubuyekezwa kwe- Ukuhlolwa kwe-Covid kudingwa yizwe. Njengoba ukwazi ukubona, uma ufuna ukuthatha uhambo, uzoba ngaphansi kwemikhawulo eminingi. Futhi lokhu ngeke kuthuthuke kuze kube ukugoma kukhulu. Kepha okungenani ungaqhubeka nokuhamba, okuyinto engeyona into encane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuhlolwa kwe-Covid kuyadingeka emazweni
Izincwadi zokuhamba eziyi-10 eziphezulu zabathandi be-adventure